Vaovao - Inona ny politika i Shina hanohanana ny fampandrosoana matanjaka ny indostrian'ny fanontana sy ny fonosana?
Satria ny indostrian'ny fanontam-pirinty sy ny fonosana dia manana fahaizana matanjaka mandray mpiasa, ary ambany ny haavon'ny fahalotoan'ny tontolo iainana, dia nanohana azy mafy ny governemanta nasionaly sy ny eo an-toerana. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia namoaka politika indostrialy marobe mifandraika amin'ny indostrian'ny fanontana taratasy sy fonosana ny governemanta sinoa.
1. "Fanambarana momba ny fampiharana ny fanontana maintso"
Tamin'ny volana oktobra 2011 dia namoaka ny "Fanambarana momba ny fampiharana ny fanontana maintso" ny Sampandraharaha misahana ny asa fanaovan-gazety sy ny famoahana taloha ary ny minisiteran'ny fiarovana ny tontolo iainana ary nanapa-kevitra ny hanao pirinty maitso. Ny sakany amin'ny fampiharana dia ahitana ny fitaovana fanaovana pirinty, ny akora ary ny fanampiana, ny fizotry ny famokarana ary ny famoahana, ny fonosana sy ny haingon-trano ary ny zavatra vita pirinty hafa, izay misy ny fizotry ny famokarana vokatra vita pirinty.
Ho fanampin'izany, hanangana rafitra fanontana maitso amin'ny indostrian'ny fanontana izahay, hamolavola sy hamoaka ny fenitra fanontana maitso, ary hampiroborobo tsikelikely ny fanontana maitso eo amin'ny sehatry ny faktiora, tapakila, fonosana sakafo sy zava-mahadomelina sns. manangana orinasa fampisehoana fanontana maitso ary mamoaka politika fanohanana mifandraika amin'ny fanontana maitso.
2. "Tari-dalana momba ny fividianana orinasa maitso (andrana)"
Mba hampiroboroboana ny fananganana fiaraha-monina mitahiry harena sy tia tontolo iainana, mitarika sy hampiroborobo ireo orinasa mba hanatanterahana am-pahavitrihana ny andraikiny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, hametraka rojom-pamokarana maintso ary hahatratra ny fampandrosoana maitso, karbaona ary boribory 22 Desambra 2014 , Ministeran'ny Varotra, Minisiteran'ny Fiarovana ny tontolo iainana teo aloha, ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Teknoloolojian'ny fampahalalam-baovao dia namoaka ny "Enterprise Green Procurement Guidelines (Trial)", izay nanolotra:
Amporisiho ireo orinasa hanatsara ny fizotry ny fividianana entana, handray anjara mavitrika amin'ny famolavolana ny vokatra sy ny famokarana vokatra, ary hitarika ireo mpamatsy hampihena ny fanjifana akora samihafa sy ny fonosana amin'ny alàlan'ny famakafakana ny soatoavina sy ny fomba hafa, ary hanolo azy ireo fitaovana ara-tontolo iainana kokoa mba hialana na mampihena ny fahalotoan'ny tontolo iainana;
Amporisiho ireo orinasa hitaky ny mpamatsy mba hamatsy vokatra na akora mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fonosana maitso, tsy hampiasa zavatra misy poizina na manimba toy ny fonosana, hampiasa fitaovana fonosana azo simbaina, simba na tsy manimba, hialana amin'ny fonosana be loatra, ary mifanena amin'ny ambanin'ny toerana. ny fangatahana, ahenao ny fanjifana ara-materialy ny fonosana;
Ny mpividy sy ny mpamatsy dia afaka mampiroborobo ny fanjifana maintso amin'ny fiarahamonina iray manontolo amin'ny fanoherana ny famonosana entana be loatra, fitarihana ny mpanjifa handray anjara mavitrika amin'ny fanjifana maintso, ary hampihena ny fampiasana ireo vokatra azo atsangana sy harona plastika;
Tsy tokony hividy vokatra izay tsy mahafeno ny fepetra takian'ny manampahefana ara-barotra mahay ny orinasa mba hisorohana ny fonosana be loatra ary hampiroborobo ny fanodinana entana.
Raha jerena ny fepetra takiana amin'ity torolàlana ity, ny vokatra sy ny serivisy fanontana maitso dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fividianana maintso, izay hitondra fotoana vaovao ho an'ny fampandrosoana ho avy ny orinasam-pirinty maintso sy ireo mpanamboatra akora maitso sy mpanampy ao amin'ny fireneko. Ny fanovana maitso dia hanana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana.
3. “Namboarina tany Chine 2025 ″
Tamin'ny Mey 2015, namoaka ny drafitra stratejika “Vita any Shina 2025 the ny filankevi-panjakana. "Vita any Shina 2025 ″ dia drafitra stratejika nasionaly hanamafisana ny famokarana avo lenta, ary asa am-polony taona voalohany amin'ny paikady" Telo Taona "amin'ny fananganana an'i Shina ho toy ny hery famokarana.
Ny programa dia manolo-kevitra ny hanafaingana ny fanovana maitso sy ny fanavaozana ny indostrian'ny famokarana, hampiroborobo tanteraka ny fanodinana maitso ny indostrian'ny famokarana nentim-paharazana toy ny vy, metaly tsy ferrous, akora simika, akora fananganana, indostria maivana, fanontana sy fandokoana, mampivoatra sy mampiroborobo ny maitso teknolojia sy fitaovana, ary mahatsapa ny famokarana maintso; manafaingana ny fampiroboroboana ny teknolojia vaovao momba ny fampahalalam-baovao sy ny famokarana Teknolojia fampidirana sy fampandrosoana, ary ny famokarana manan-tsaina ho fitarihan'ny fampidirana lalina ny indostrialy sy ny informatization.
Ilaina ny mifantoka amin'ny fampivoarana ny fitaovana marani-tsaina sy ny vokatra marani-tsaina, hampiroborobo ny fahazotoana amin'ny fizotry ny famokarana, hamboly fomba famokarana vaovao, ary hanatsara tanteraka ny haavon'ny asa fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny fitantanana ary ny serivisy. Amin'ny ho avy, miaraka amin'ny famoahana olona malaza ny famokarana marani-tsaina, ny fonosana maranitra ary ny fanontana dia ho lasa lalam-pampandrosoana ho avy eo amin'ny indostria.
4. "Fampandrenesana momba ny drafitra fampihenana ny fambolena voajanahary ho an'ny orinasa lehibe"
Tamin'ny volana Jolay 2016, ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknoloolojian'ny fampahalalana ary ny Minisiteran'ny Vola dia niara-namoaka ny "Fampandrenesana ny drafitry ny fihenan'ny fitambaran-karena voajanahary ho an'ny indostria manan-danja." Araka ny fepetra takiana amin'ny drafitra, amin'ny taona 2018, ny emission VOC an'ny sehatry ny indostria dia hahena 3,3 tapitrisa taonina raha oharina amin'ny 2015.
Ny "Drafitra" dia nisafidy indostria 11 ao anatin'izany ny inks, adhesives, fonosana ary ny fanontana, petrochemicals, coatings sns. Ho toy ny indostria lehibe hanafainganana ny fihenan'ny VOC ary hanatsara ny haavon'ny orinasa mpamokatra maintso.
Ny "Drafitra" dia nanambara mazava tsara fa ny indostrian'ny fonosana sy ny fanontana dia tokony hampihatra tetikasa fanovana teknolojia ary hampiroborobo ny fampiharana ny ambany (tsy misy) VOC inks maitso, varnish, vahaolana amin'ny loharano, agents d'exploitation, adhesives, manify ary fitaovana hafa. ; Amporisiho ny fampiasana ny haitao fanontana flexographic sy ny haitao mitambatra tsy misy solvent, ary ahenao tsikelikely ny teknolojia fanontana gravure sy ny haitao maina mifangaro.
5. "Hevitra mitarika amin'ny fanafainganana ny fanovana sy ny fampandrosoana ny indostrian'ny fonosan'ny fireneko"
Tamin'ny Desambra 2016, ny "Hevitra mitarika amin'ny fanafainganana ny fanovana sy ny fampandrosoana ny indostrian'ny fonosana ao Shina" navoakan'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny haitao momba ny haitao sy ny minisiteran'ny varotra dia nanolotra: fonosana ho indostrian'ny orinasa mpamokatra entana; mifantoka amin'ny fonosana maitso, fonosana azo antoka, fonosana maranitra ary fonosana mahazatra, Hananganana rafitra fanavaozana teknolojia indostrialy; miantoka ny fitomboan'ny indostria haingam-pandeha haingam-pandeha ary manatsara ny fahaizany mampivelatra sy ny fambolena marika; fampitomboana ny fampiasam-bola R&D hanatsarana ny fahaiza-manao fahombiazana tsy miankina sy ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny teknolojia manan-danja; manatsara ny fampahalalana momba ny indostria, ny automatisation ary ny intelligence intelligence.
Mandritra izany fotoana izany dia ilaina ny manala ny fanjifana avo sy fanjifana angovo avo lenta amin'ny indostrian'ny fonosana, manangana sy mamorona rafitra famokarana maintso; mitarika ny fanangonana ny fahaiza-manao fototra amin'ny teknolojia fonosana miaramila-sivily, ary manatsara ny haavon'ny fanohanana fonosana fiarovana ho an'ny asa miaramila maro karazana; manatsara ny rafitra fenitra indostrialy ary mitondra fiara amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fonosana Ny fenitra ny rojo famatsiana lojika dia manatsara ny haavon'ny fitantanana mahazatra sy ny tahan'ny benchmarking iraisam-pirenena.
6. "Drafitra fampiroboroboana ny indostria Shina (2016-2020)"
Tamin'ny volana Desambra 2016, ny drafitra "China Packaging Industry Development Plan (2016-2020)" navoakan'ny China Packaging Federation dia nametraka ny tetikady stratejika amin'ny fananganana hery famonosana, manantitrantitra ny fanavaozana tsy miankina, mamaky ny teknolojia fototra, ary mampiroborobo tanteraka ny fonosana maitso, fonosana azo antoka, ary fonosana maranitra. Ny fampiroboroboana ny fonosana fonosana dia manatsara ny fifaninanana feno amin'ny sehatra lehibe amin'ny vokatra fonosana, fitaovana fampirimana ary ny fonosana ary ny fanontana.
7. "Drafitra fampandrosoana ny indostrian'ny fanontana mandritra ny vanim-potoana drafitra dimy taona faha-13"
Tamin'ny volana aprily 2017, ny “Drafitra fivelomana dimy ambin'ny folo taona ho an'ny indostrian'ny fanontana” navoakan'ny State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television dia nilaza fa nandritra ny vanim-potoana "Drafitra Dimy ambin'ny folo taona", ny refin'ny fanontana ny fireneko. ny indostria amin'ny ankapobeny dia hampifanarahina amin'ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena, hahazoana fanitarana mitohy. Tamin'ny faran'ny vanim-potoana "Drafitra Dimy Dimy 13" dia nihoatra ny 1,4 trillion ny sandan'ny vokatra ateraky ny indostrian'ny fanontana, laharana voalohany amin'ny an'izao tontolo izao.
Ny fanontana nomerika, ny fanontana fonosana, ny fanontana vaovao ary ny sehatra hafa dia nitazona fampandrosoana haingana, ary ny habetsaky ny fanontana ny varotra fanodinana vahiny dia nitombo hatrany; fampiroboroboana ny fanovana ny fanontam-pirinty ho famoronana famoronana, fanaingoana manokana, ary fampiharana fiarovana ny tontolo iainana, ary ny fomba fanontana manohana toy ny fanonta offset, fanontana lamba ary fanontana flexo. Ny teknolojia nomerika dia natambatra sy novolavolaina. Ny politikam-pirenena amin'ny indostrian'ny fonosana sy fanontana taratasy dia manome fanohanana matanjaka amin'ny fampandrosoana ny indostria.
8. "Rindran-damina amin'ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana sy fanavaozana ny kolontsaina mandritra ny drafitra dimy taona faha-13"
Tamin'ny volana Mey 2017, ny filankevi-panjakana dia namoaka sy nametraka ny "drafitra momba ny drafi-pivoarana ara-kolontsaina nasionaly sy ny fanavaozana mandritra ny vanim-potoana drafitra dimy taona faha-13", izay nametraka mazava tsara ny ideolojia mitarika sy ny fepetra takiana amin'ny fampandrosoana ny kolontsaina mandritra ny dimy taona faha-13 Vanim-potoana drafitra. Ny drafitra dia manolo-kevitra ny hampiroborobo ny fanovana sy ny fanavaozana ireo indostria nentim-paharazana toy ny famoahana sy ny fizarana, ny famokarana sarimihetsika sy ny fahitalavitra, ny zavakanto sy ny asa-tanana, ny fanontana sy ny fanaovana dika mitovy, ny serivisy fanaovana dokam-barotra, ny fialamboly ara-kolontsaina ary ny fanohanana ny fampandrosoana ny fanontana nomerika sy ny fanontana an-tsoratra.
9. "Fomba sy sori-dàlana momba ny fonosana maintso"
Tamin'ny volana mey 2019, ny State Administration for Market Regulation dia namoaka ny "Green Packaging Evaluation Methods and Guidelines", izay namaritra ny mason-tsivana fanombanana ny fonosana maitso, ny fomba fanombanana, ny atiny ary ny endrika ny tatitra momba ny fanombanana momba ny fitakiana karbaona ambany, fitsitsiana angovo, tontolo iainana fiarovana sy fiarovana ny vokatra fonosana maitso. Ary mamaritra ny hevitry ny "fonosana maitso": amin'ny tsingerin'ny fiainana feno ny vokatra fonosana, eo ambanin'ny fahitana ny fepetra takiana amin'ny fonosana fonosana, fonosana izay tsy dia manimba ny fahasalaman'ny olombelona sy ny tontolo iainana ekolojika, ary mandany loharano sy angovo firy.
Ny "Fomba fiasa sy sori-dàlana momba ny fonosana maintso" dia mamaritra ny fepetra ara-teknika ilaina amin'ny laharana fonosana maitso avy amin'ny lafin-javatra efatra: ny toetoetran'ny harena, ny toetran'ny angovo, ny toetran'ny tontolo iainana ary ny toetran'ny vokatra.
Ny mpanamboatra fonosana fanontam-pirinty SmartFortune dia tao amin'ity orinasa ity (Customize pirinty boky, ampanjifaina boaty fanomezana taratasy, ampanjifaina kitapo fanomezana taratasy) nandritra ny 25 taona mahery, tongasoa anao hiara-hiasa amin'ny orinasa misy anay hamonjy ny vidinao.
Fotoana fandefasana: Jan-04-2021